Air Conditioner yeBhazi, Murairidzi, Bhazi rechikoro uye Yakagadziriswa bhazi fekitori uye vagadziri | SONGZ
Mhepo Inodzora Yebhazi, Murairidzi, Chikoro Bhazi Uye Yakataurwa Bhazi
SZR Series, Mid-To-High-End Bhazi, Ye 8.5-12.9m Bhazi, Mhangura Tube Aluminium Fin Condenser.
SZR dzakateedzana rudzi rwekupatsanura denga repamusoro peyunifomu yemhepo inodzora ye8.5m kusvika 12.9m kubva pakati-kusvika-kumusoro-kumagumo kwakajairwa bhazi, murairidzi, bhazi rechikoro kana bhazi rakataurwa. Iko kutonhora kugona kweakateedzana bhazi air conditioner anotangira kubva 20kW kusvika 40kW, (62840 kusvika 136480 Btu / h kana 17200 kusvika 34400 Kcal / h). Kana iri yekugadzirisa mweya yemakombi kana bhazi isingasviki 8.5m, ndapota tarisa kuSZG dzakateedzana. Kana iwe unogona kutaura nesu pa sales@shsongz.cn kuti uwane rumwe ruzivo.
Unyanzvi Hutsananguro hweBhazi A / C SZR Series:
WDC-II / FD
22 kW kana
24 kW kana
28 kW kana
30 kW kana
26 kW kana
33 kW kana
Yakakurudzirwa Kureba Kwebhazi
（Inoshanda kumamiriro ekunze eChina）
Kuyerera Kwemhepo Vhoriyamu
31 kW kana
37 kW kana
34 kW kana
36 kW kana
40 kW kana
SZR-IIF-D Ruzivo rwehunyanzvi SZR-III-D Ruzivo rwehunyanzvi SZR-IV-D Ruzivo rwehunyanzvi
SZR-IVF-D Ruzivo rwehunyanzvi SZR-VD Ruzivo rwehunyanzvi SZR-VF-D Ruzivo rwehunyanzvi
SZR-VI-D Ruzivo rwehunyanzvi SZR-VIF-D Ruzivo rwehunyanzvi
3. Kuchenesa basa, uye chinosarudzira sarudzo.
SZR Series R & D Nhoroondo:
SZR akateedzana mhepo mafaera ekugadzira anogadzirwa kuti asangane nekuwedzera kutaridzika kunodiwa kwemabhazi emhepo maindasitiri mumabhizimusi ebhazi. Kuti uwane kunaka kwekuratidzika kwemhando yepamusoro, SZR akateedzana emhepo mamhepo anoshandisa musanganiswa wakaumbirwa weSMC chifukidzo nealuminium alloy.
Inogadzirisa zvinetswa dambudziko rekutarisika kwakashata kwetsika-yakapendwa fiber girazi rakasimbiswa padenga repurasitiki remabhazi emhepo mamiriro. Panguva imwecheteyo, ine-zvakadzama yakagadziriswa sisitimu uye chimiro, ichifunga nezve kusimudzira kweyekuita kwakanyanya uye kurema kurema.
Yakatsanangurwa Yehunyanzvi Kuzivisa kweSZR Series Bhazi Mhepo Inodzora
1. AC chifukidziro: tiye anovhara anotora nzira yeSMC nealuminium alloy.
Inofananidzwa neyechinyakare yakagadzirwa nemaoko FRP pamusoro pevhavha, chimiro chechitarisiko chinovandudzwa kwazvo, avhareji yezuva nezuva inoburitswa inosimbiswa kwazvo. Izvo zvinoshanda kune epakati uye epamusoro-giredhi yeruzhinji yekufambisa uye emabhazi evashanyi.
Ndokumbira utendeukire kuSUPPRT-FAQ, kuti uzive zvakawanda nezve mutsauko uripo pakati peSMC nekavha yegirazi yegirazi.
2. AC Chitarisiko: Mutete uye kururamisa chimiro
Kuonekwa kweSZR akateedzana bhazi AC kunoyerera, neakanaka chitarisiko uye mutete dhizaini. Ukobvu hwemhepo inodzora i188mm, inova yakaderera pane iyo hukobvu hwazvino uno hwakajairwa mamhepo.
Minimum ukobvu 188mm
3. AC Chimiro: Chiedza chakareruka
Iyo condenser base inotora yakachinjika V-yakaumbwa furemu isina yepasi girafu dhizaini, iro divi danda rakareruka uye rakagadziriswa, uye iyo evaporator gungano remhepo dhayeti inotora inovandudza pasi gomba rakabatanidzwa rakakombama chimiro. Kuburikidza nenzira dziri pamusoro, huremu hwemhepo inodzora hwaderedzwa zvakanyanya.
Yakareruka Kurutivi Beam Maitiro
4. AC Chimiro: Sevhisi & Kugadzirisa Shamwari
Kavha yepamusoro yeSZR yakateerana nemhepo inogadzirisa inotora hinge yekubatanidza chimiro, uye ndiro yekuvhara haidi kubviswa kana kurodha mota, iyo inoponesa zvikuru nguva yekumisikidza. Iyo fan inodzikamisa yakaiswa kubva kumusoro, uye chifukidziro hachifanirwe kuvhurwa kana fanika inodzora yatsiviwa, uye iyo fan inosimuka inochengetwa panguva yekugadzirisa. Panguva imwecheteyo, zvinongofanirwa chete kuvhura chikamu chevhavha yepadivi, icho chiri nyore kugadzirisa mushure mekutengesa.
Evaporator hinge chimiro
Condenser fan uye hinge chimiro
5. AC Performance: Yakakwira-inoshanda condenser
SZR yakateerana bhazi mhepo mafaera akagadzirwa zvinoenderana nemamiriro ebhazi air conditioner condensers, yakasanganiswa neCFD kutevedzera uye yakavakirwa pane chaiko kuongororwa mhedzisiro, kukwidziridza kuyerera kurongeka kweiyo condenser, uye kutora dhizaini yakagadziriswa yekusaenzana kuyerera kuti uwane yakakwirira kushanda kweanopisa kupisa Kuchinjana kupisa.
CFD kuongororwa kwemhepo kumhanya kwekupisa kupisa
6. AC Performance: Yakasarudzika mhepo inotungamira dhizaini
SZR yakateedzana bhazi air-kutonhodza condenser yakagadzirirwa ine condenser fan fan inotungamira hood. Iyo yemhepo inotungamira hood inotora iyo Archimedes spiral musimboti uye yakatenderera koni dhizaini yekukonzeresa inoyerera mweya inoyerera sangano uye kubvisa yakajairwa kupisa pasina mweya gwara. Dambudziko rekudzoka kwemhepo rinovandudza zvakanyanya kupisa kupisa kwekuchinja kweyakagadziriswa mhepo.
Yakasarudzika inodzora fan fan
Kuburikidza nekuenzanisa kwekuedzesera uye kuyedza kwekuyedza, iyo yekuyerera yemhepo sangano inonzwisisika kana mhepo deflector yaiswa. Pasina chifukidziro. Iko kubuda kwemhepo kuyerera kwakapararira, uye iyo yekudzoka yekuitika iri pachena.
Kuongorora kwekubuda kwemhepo pasina hood yemhepo & yemhepo ine mweya hood
7. AC Performance: Zvishoma firiji yekuchaja vhoriyamu
Zvichienzaniswa neyakajairwa bhazi mhepo inotonhodza, SZR akateedzana inotora yakagadziridzwa kupisa exchanger dhizaini uye yakagadziridzwa dhizaini yemukati kupomba accessories. Deredza firiji yechando ne30%. Nekudaro ichideredza kukanganisa kwefriji leakage pane zvakatipoteredza.
Pashure: Air Conditioner yeMini uye Midi Guta Bhazi kana Yevashanyi Bhazi
Zvadaro: Economy Mhepo Inodzora yeBhazi, Murairidzi, Bhazi reChikoro uye Bhizinesi rakataurwa